Abuur caado kuu gaar ah Debian DVD | Laga soo bilaabo Linux
Abuur DVD kuu gaar ah oo Debian ah
Daniel Rojas | | Aplicaciones, Qaybinta, GNU / Linux, Kuwa kale
Hagaag, sida cinwaanku tilmaamayo, waxaan kuu keenayaa a script saamaxaya abuuritaanka DVD caado ah Debian. Dhibcaha abuuristeeda waxaa loogu talagalay Marcos Ruush, xubin aasaasihii Mashruuca Centrux, Kaas oo aan xubin ka ahay iskaashina ka wada yahay.
Waxaa loo abuuray baahida aan u qabnay inaan soo saarno sawirro la rakibi karo oo ah nidaamka horay loo beddelay waqti gaaban iyo hab otomaatig ah. Waa in la ogaadaa inay si joogto ah isu beddeleyso oo kani waa qaybtii ugu horreysay ee shaqeyneysa. Waxaa la dhihi karaa waxay ku jirtaa heerka beta.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka uu bixiyo Qormada waa:
Shakhsiyeynta Bannerka sare ee kujira Rakibaadda Sawirka
Habeynta DVD Boot Splash Image
Ka mid noqoshada qalabka aan bilaashka ahayn ee qalabka
Xulashada Qaabdhismeedka Nidaamka
Xulashada laanta nidaamka
Ka-habeynta isticmaale / isgarad
Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa nidaamyo badan oo nidaamyo ah in wax laga beddelo. Waxaas oo dhan waxaa laga helaa feylasha qaabeynta qoraalka, markasta oo ay la socdaan faallooyinkooda si loo caddeeyo waxa ay wax ka beddelaan.
Waa in la ogaadaa in habka ugu fiican ee loo abuuri karo sawirrada waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah ay tahay in la yeesho a muraayad on server deegaanka Debian, sidaas awgeed iska ilaalinaya inaad soo dejiso xirmooyinka isku duubnaan kasta. Xaaladdeenna waxaan ku haysannaa server oo daqiiqado gudahood waxaan haysannaa sawir diyaar u ah inuu DVD ku gubo oo rakibo.
Si qoraalka u shaqeeyo, qaabdhismeedka galka soo-dejinta waa in la ixtiraamo, taasi waa, waxa ku jira galka iwm ee soo dejintu waa inay galaan / iwm. Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa galka usr dheecaan (waa inuu ku yaal / usr).
Aniga oo aan ku sii dheeraanin ayaan ka tagayaa xiriirka kala soo baxa
Ka soo degso qoraalka SourceForge
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Abuur DVD kuu gaar ah oo Debian ah
Ummm .. Aan isku dayno oo aan aragno sida ay wax u socdaan!
Waan arki doonaa sida qoraalka u socdo 🙂
ILAAHAY GUUL dijo
Maaha inaad dhibto, laakiin had iyo jeer waxay i siisay xoogaa qosol ah markay sameeyaan mowduuc ama wax muujinaya sawir Linux distro leh kiiskeeda iyo sanduuqa, maadaama lagu iibin lahaa dukaan kasta.
U jawaab ILAAHAY GUUL
Hahahahaha run. In kasta oo aan Ubuntu ku iibinayo 12.10 CD-yada $ 20 USD xaafaddayda oO
Xiiso leh, waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo. Qof ayaa ii soo diri kara qoraalka emaylkeyga (academia@pinarte.cult.cu) Dalkeyga kama imaan karno http://downloads.sourceforge.net
Ku jawaab braniegi
Waxay kudhowaad yihiin 141Mb, hadaad rabto waxaan ku shubi karaa marti gelin kale. Mediafire waa caadi?
Raadiyaha internetka oo leh mpd + ncmpcpp / Mplayer (iyo Gunno)